Ikhaya le-Koselig Cuyuna - Eduze Kwemizila Yebhayisikili/I-Main St!
Crosby, Minnesota, i-United States
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Andrew And Joy
U-Andrew And Joy Ungumbungazi ovelele
Leli khaya le-Crosby eliklanywe kahle liyindawo ekahle yokuphumula ngemva kosuku olude lokuhlola ngaphandle.
Izivakashi zingajabulela amagumbi okulala angu-3 anethezekile ukuze zilale kahle, amagumbi okugeza ahlanzekile anamathawula amasha, izindawo zokuhlala ezinomoya futhi zesimanjemanje, kanye nekhishi eliklanywe kahle elivulela igumbi lokudlela elibanzi. Ngaphezu kwalokho, igceke elibiyelwe ngokuphelele, umgodi womlilo kanye nompheme kunikeza indawo yangaphandle yokuzijabulisa. Ikhofi, itiye, izimpahla ze-s'mores, nezinkuni kuyancomeka!
I-Koselig: Ngokuhunyushwa ngokukhululekile ngokuthi "coziness," isichasiso sesiNorweigan sibizwa ngokuthi "koos-uh-lee."
I-Koselig icela imfudumalo, ukunethezeka, nokuxhumana. Iyingxenye enhle yempilo, futhi ithwebula kahle i-vibe yaleli khaya elibuyekeziwe lase-Crosby elinempahla yesimanje enethezekile, iphansi le-maple elibuyiselwe kanye nekhishi eligcwele.
Ikhaya linezitezi ezinhle, ezibuyiselwe ngokhuni kulo lonke izinga lesi-2 kanye negumbi lokuhlala le-1st floor. Imibhede emisha enethezekile, okokulala namathawula amasha, nokuhlobisa kwesimanjemanje kuzokunikeza umuzwa wekhwalithi ephezulu owufunayo ngesikhathi uhlala.
Ikhaya lethu lihlelelwe ukukunikeza ngokumangalisayo ukuhlala eNyakatho nokufinyelela okulula ezindleleni zamabhayisikili e-Cuyuna, amachibi, izitolo nezindawo zokudlela. Indawo yokuhlala, yokudlela nekhishi ikuvumela ukuthi uphumule futhi uhlanganyele kalula ngemuva kosuku olumatasa ungaphandle. Izindawo zokupaka egalaji ezi-2 kanye nesitoreji esivikelekile segiya lakho (amabhayisikili, ama-kayak, ama-SUP, ama-skis anqamula izwe, izicathulo zeqhwa, njll.) egalaji elivalekile (noma elingaphansi) likuvumela ukuthi uphumule kalula.
Jabulela ukudla emphemeni kanye nama-s'mores ngasemgodini womlilo. Igceke lethu elibiyelwe lilungele abangani bakho be-canine! Sicela ukhumbule imali yesilwane esifuywayo ($50) kanye nemithetho yasekhaya: izilwane ezifuywayo azivunyelwe efenisha noma emibhedeni, futhi yonke imfucuza yezinja egcekeni kufanele ilandwe. Sizongeza inkokhelo yesilwane esifuywayo ekubhukheni kwakho lapho ubhukha. Umkhawulo wezinja ezi-2 eqenjini ngalinye ovunyelwe.
Asikwazi ukulinda ukuba nawe!
Singamabhulokhi ambalwa kuphela ukusuka ezindleleni zamabhayisikili, i-Serpent Lake kanye nedolobha lase-Crosby (amabhulokhi ambalwa enyakatho ye-Crosby Main St., futhi cishe nebhulokhi empumalanga yomgwaqo onguthelawayeka 6/3rd Ave NW). ICrosby iyidolobha elinomlando lezimayini elisanda kubona ukutshalwa kabusha kwezimali. Lesi sakhiwo asiyona "indlu ecashile"; iyikhaya lomndeni owodwa elivalelwe khona kanye edolobheni elinegceke elijwayelekile nomakhelwane nhlangothi zonke. Hlala nathi lapho ufuna ukuba ESIKHATHINI ukuze wazi ngempela i-Crosby enezindawo zokudlela ezinhle, ikhofi lengcweti no-ayisikhilimu, kanye nendawo yokuphisa utshwala ejabulisayo phakathi kohambo lwemizuzu eyi-10 noma ukugibela ibhayisikili okufushane.
Ibungazwe ngu-Andrew And Joy
Sizokuthumelela lonke ulwazi lwakho lokuhlola isonto ngaphambi kokuba ufike. Sicela ufunde imanuwali yendlu nge-Airbnb futhi ukuze uthole yonke imininingwane oyoyidinga lapho uhlala khona. Othile ovela ethimbeni lethu labaphathi uzophinde afinyelele ngombhalo ngosuku lokufika kwakho ukuze aqinisekise ukuthi unalo lonke ulwazi oludingayo.
Sizokuthumelela lonke ulwazi lwakho lokuhlola isonto ngaphambi kokuba ufike. Sicela ufunde imanuwali yendlu nge-Airbnb futhi ukuze uthole yonke imininingwane oyoyidinga lapho uhlal…
UAndrew And Joy Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Crosby namaphethelo